ညီနေမင်းDell Drivers, Drivers
Realtek ALC272 Audio DriverVersion:6.0.1.6039, A09
Operating System: Windows 7/Vista 32-64 bit
HLDS GT10N 8X 12.7 SATA Trayload DVDRW FirmwareVersion:A109, A06
OPTIARC AD-7585H 8X 12.7 SATA Trayload DVDRW FirmwareVersion:KD03, A01
Intel HM55 Express Chipset FamilyVersion:9.1.1.1020, A02
Conexant D400,External USB 56K Modem DriverVersion:Drv_Win7-64_2.0.20.0, A00
Alps TouchPad DriverVersion:7.1102.101.101, A02
Operating System: Windows 7/vista 32-64 bit, windows xp
DW365 Bluetooth - Win7 32bit and 64bit Combined Driver and ApplicationVersion:6.2.0.9603, A03-1
Realtek RTL8111DL Ethernet Controller DriverVersion:7.006.0820.2009, A04
Intel Module 6250 WIFI/WiMax on Win764 bitVersion:tic TRFXW0038D, A00
Operating System: Windows 7-64 bit Dell Wireless WLAN 1520 Half MiniCardVersion:5.30.21.0, A01
Operating System: Windows732-64 bit
Intel Graphics Media Accelerator HDVersion:8.15.10.2104, A07
Operating System: Windows 7/vista 64 bit
Dell Digital TV Receiver ATSC-01Version:1.88.27090.1, A01
Operating System: Windows 7/vista 32-64 bit, win xp
AMD ATI Mobility Radeon HD 540v/5450/4330Version:8.692.1.0000, A18File Size:124 MBOperating System: Windows732-64 bit
Dos commands နှင့်လက်တွေ့အသုံးများ (မြန်မာလို)
တောင်းထားတဲ့ ညီလေးတစ်ယောက်ရှိလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . ဦးအောင်လင်းရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ download လုပ်လိုက်ပါ . adobe premiere cs4 နဲ့ cs5 ကို နဲနဲအားတာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ် . တောင်းထားတာကလဲများတယ် ဆိုတော့ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ အားတဲ့အချိန်လေးကို ဖဲ့ပြီးတော့ တင်ပေးနေတာပါပဲ. တစ်ချို့မေးခွန်းတွေ ဖြေတာနောက်ကျ တဲ့အခါမျိုးမှာ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ် . Download ifile.it | Mediafire | Zshare | Ziddu | Megaupload
ko toe : Ko Nyi smartlaunch 4.1 crack lo chin loe par.
Optimize Your Cyber Cafe
Smartlaunch 4.1 isaprofessional software package designed to deliveracomplete management solution for gaming centers and internet cafés. Smartlaunch® 4.1 introducesawide range of features including computer booking, license management, financial and statistical reports, integrated POS system and advanced security. All together Smartlaunch 4.1 reduces the costs of technicians and software licenses, enhances your customer handling and provide you with essential information on how to optimize your business.
Cyber cafe မှာသုံးတဲ့ program ပါ cafezee တို့ထက် အများကြီးသာပါတယ် . အထဲမှာ ကိုလိုချင်သလောက် ကွန်ပျူတာအတွက် crack ရော keygen ကော တင်ပေးထားပါတယ် . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . ကွန်ပျူတာ အလုံး 100 လဲရတယ် အဲ့ထက်ကျော်လဲရပါတယ် . လိုသလောက်ကွန်ပျူတာ အလုံးရေ ကို ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှ crack ကို ဖြည်လိုက်ပါ . အားလုံးအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . လိုချင်ရင် အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ . Download mirrorcreator (or) Mirrorcreator
မင်းဇော်ဦး Frame maker software လေးကိုတင်ပေးလား
ညီလေးရေ တင်တော့တင်ပေးလိုက်ပါပြီ File က 1GB ကျော်နေလို့ အစ်ကို ဖိုင်ခွဲပြီးတော့ ပြန်မတင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး . အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် .
Download ulto >> Part1 | Part2 | Part3
Guestကိုညီနေမင်းရေ...ကျွန်တော့်ကို driver magician ရဲ့ serial လေး လိုချင်လို့ပါ ခင်ဗျာ...အကိုအားတဲ့အချိန်များ တင်ပေးနိုင်မလားဗျာ ...
အောက်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အဆင်ပြေပါစေဗျာ .
kozawlatt30780@gmail.com ကိုညီနေမင်းခင်ဗျား google earth pro ရဲ့ email နဲ့ linsced Key လေးရချင်လို့ပါ ကျေးဇူးပြုပြီးပေးပါဦး
Google earth Google Earth Plus v6.0.3.2197 နောက်ဆုံးထွက် version ကို patch နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .
Download Accelerator Plus Premium v9.5.0.2
Min Zaw : Bro plz upload download accelerator plus
ကဲ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ အထဲမှာ patch ဖိုင်ပါ ထည့်ပေးထားပါတယ် . အဆင်ပြေ မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . သူက Downloader တစ်ခုပါ . IDM တို့ orbit downloader တို့နဲ့အတူတူပါပဲ . စမ်းသုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စမ်းသုံးကြည့်ကြပါ.
security center can't be started error ဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲ
kachin lay : ကိုညီနေမင်းခင်ဗျာ ကျနောက်စက်မှာ Erro ဖြစ်နေတာကို
ဘယ်လို လုပ်၇င် အဆင်ပြေမလား မသိဘူး ၇ှင်းပြပေးစေ ချင်ပါတယ်. ခုမှကွန်ပျူတာ လေလာနေသူပါ ဘယ်လို မေး၇မှန်းမသိလို့ ဓါတ်ပုံ ၇ိုက်ပြီးပို့လိုက်တယ်
ညီလေးရေ အောက်ကနည်းအတိုင်းဖြေရှင်းကြည့်လိုက်ပါ .Run Box ကိုခေါ်လိုက်ပါ (window + R)
Run box ပေါ်လာရင် services.msc လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
services box ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် . အဲ့ဒီ့ box ထဲက ညာဖက်အခြမ်းမှာ Security Center ဆိုတာကို တွေ့အောင်ရှာပါ။
တွေ့တာနဲ့ double click နှိပ်လိုက်ပါ။
Startup type ဆိုတဲ့အကွက်မှာ Automatic ဆိုတာကို ရွေးပေးပြီးရင် ok ပေးလိုက်ပါ .
အဲ့ဒီ့နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းကြည့်လိုက်ပါ . အဆင်မပြေရင်ပြေပါ နောက်တစ်နည်း ပြောပြပေးပါ့မယ် .
Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x64 (64 bit) Drivers
အောင်မိုးးကိုညီ ACER 4736G Drivers ရရင်ကူညီပါအုံး- ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ကိုအောက်မိုးရေ အောက်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါပြီနော် . အဆင်ပြေ မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ် . Audio Realtek 5.10.0.5802Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x64 (64bit) Driver(Download)CardReader Jmicron 1.0.25.4Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x64 (64bit) Driver(Download)CardReader Realtek 6.0.6000.20125Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x64 (64bit) Driver(Download)Chipset Intel v9.0.0.1008Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x64 (64bit) Driver(Download)Lan Atheros 1.0.0.39Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x64 (64bit) Driver(Download)Modem Agere v2.1.93.0Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x64 (64bit) Driver(Download)Modem Conexant 7.80.4.0Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x64 (64bit) Driver(Download)TouchPad ALPS 7.5.2002.301Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x64 (64bit) Driver(Download)TouchPad Synaptics 12.2.2.0Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x64 (64bit) Driver(Download)VGA Intel 6.14.10.5002Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x64 (64bit) Driver(Download)VGA NVIDIA 6.14.11.7952Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x64 (64bit) Driver(Download)Wireless LAN Atheros 7.6.0.239Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x64 (64bit) Driver(Download)Wireless LAN Ralink 1.4.0.0Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x64 (64bit) Driver(Download)WLAN Intel 12.0.0.78Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x64 (64bit) Driver(Download)Bluetooth Broadcom 5.1.0.4500Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x64 (64bit) Driver(Download)Fingerprint AuthenTec 6.1.22Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x64 (64bit) Driver(Download)
Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x86 (32 bit) Drivers
အောင်မိုးးကိုညီ ACER 4736G Drivers ရရင်ကူညီပါအုံး- ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
ကိုအောက်မိုးရေ အောက်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါပြီနော် . အဆင်ပြေ မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ် . Audio Realtek 5.10.0.5802Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x86 (32bit) Driver(Download)
Camera Chicony 1.1.74.216Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x86 (32bit) Driver(Download)
CardReader Jmicron 1.0.25.4Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x86 (32bit) Driver(Download)
CardReader Realtek 6.0.6000.20125Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x86 (32bit) Driver(Download)
Chipset Intel v9.0.0.1008Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x86 (32bit) Driver(Download)
Lan Atheros 1.0.0.39Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x86 (32bit) Driver(Download)
Modem Agere v2.1.93.0Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x86 (32bit) Driver(Download)
Modem Conexant 7.80.4.0 Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x86 (32bit) Driver
TouchPad ALPS 7.5.2002.301 Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x86 (32bit) Driver
TouchPad Synaptics 12.2.2.0 Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x86 (32bit) Driver
VGA Intel 6.14.10.5002 Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x86 (32bit) Driver
VGA NVIDIA 6.14.11.7952 Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x86 (32bit) Driver
Wireless LAN Atheros 7.6.0.239 Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x86 (32bit) Driver
WLAN Intel 12.0.0.78 Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x86 (32bit) Driver
Bluetooth Broadcom 5.1.0.4500 Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x86 (32bit) Driver
Fingerprint AuthenTec 6.1.22 Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x86 (32bit) Driver
Word(doc) to PDF,Excel(xls) to PDF,PowerPoint(ppt) to PDF,TXT to PDF,PSD to PDF ,DWF to PDF,EMF to PDF ,TIF to PDF ,PNG to PDF ,GIF to PDF ,PCD to PDF ,PSP to PDF ,EPS to PDF ,TGA to PDF ,BMP to PDF ,ICO to PDF,DWG to PDF,DXF to PDF,CMW to PDF,IMG to PDF,IFF to PDF,J2K to PDF,JP2 to PDF,Jpeg to PDF,Html to PDF,WMF to PDF,DCR to PDF,PPM to PDF,PTK to PDF,PCD to PDF,JBG to PDF and many more.ကဲ အဲ့ဒါလေးတွေကို pdf ဖိုင်အဖြစ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . လိုချင်ရင် အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ . Download ifile.it | Mediafire | Zshare | Ziddu | Megaupload
ကွန်ပျူတာ တတ်ဆင်အသုံးပြုခြင်း အခြေခံသဘောတရားများ
ဟိုးအရင်ကတော့ တင်ထားပေးပြီးသားပဲ ထင်တယ် . ဒါပေမယ့် link သေနေလောက်ပြီ ထင်လို့ အသစ်ပြန်ပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . ကိုမျိုးသူရ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ကလေးပါ။ အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ် . လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ။Download ifile.it | Mediafire | Zshare | Ziddu | Megaupload
Linux OS အကြောင်းကို မြန်မာလိုရှင်းပြထားပြီးတော့ အသုံးပြုပုံကိုလဲ အသေးစိတ် ရှင်းပြထားပါတယ် . စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ စာအုပ်ကလေးပါ . စိတ်ပါဝင်စားမယ် ဆိုရင်တော့ ဖတ်သင့်ပါ. စမ်းချင်ရင်လဲ စမ်းလို့ရပါတယ် . လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Download ifile.it | Mediafire | Ziddu | Megaupload
ဒါကတော့ ၀ဘ်ဒီဇိုင်းသမား တွေအတွက် သိသင့်တာလေးတွေကို ချပြထားတဲ့ စာအုပ်လေး တစ်အုပ်ပါ။ webdesign တည်ဆောက်ပုံတွေက အစ ရှင်းပြထားပါတယ် . အတော်လေး ကောင်းပါတယ်. သူငယ်ချင်းများလဲ စိတ်ဝင်စား ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . Download ifile.it | Mediafire | Zshare | Ziddu | Megaupload
A+ ၏ နောက်ကွယ် (မြန်မာလို)
Hacking Google (မြန်မာလို)
video editing တည်းဖြတ်ရေး (မြန်မာလို)
video တည်းဖြတ်ရေး သမားများ အတွက် video editing တည်းဖြတ်ခြင်း လမ်းညွှန် စာအုပ်ပါ. အားလုံးနီးပါး စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ video editing program ကိုလဲ ကျွန်တော် တင်ပေးပါ့ဦးမယ် . အဆင်ပြေ ပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ။
Corel Draw x4 Art Design Guide (မြန်မာလို)
ဒီစာအုပ်ကတော့ သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်)ရေးထားတာပါ . Graphic design သမားများ စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင် ဖတ်လို့ရပါတယ် . ဖတ်သင့်တဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ . အဆင်ပြေ မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . လိုချင်သူများ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ .
iphone jail break လုပ်နည်း
Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x86 (32 bit) Drivers :
ညီလေးရေ အစ်ကို့အထင်တော့ 4736z ပဲဖြစ်မယ်ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် window xp အတွက်ပါ . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .
Audio Realtek 5.10.0.5802Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x86 (32bit) Driver(Download)
Wireless LAN Ralink 1.4.0.0 Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x86 (32bit) Driver
Excel 2007 မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ပါ . ဦးဇော်လင်းရေးပေးထားတာပါ . အဝေးရောက် မြန်မာများ ဖတ်ချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ . အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . Book 1 >> Download ifile.it | Mediafire | Zshare | Ziddu | Megaupload
Book2>> Download ifile.it | Mediafire | Zshare | Ziddu | Megaupload
ကိုသန်းထိုက်(ရွှေရိပ်) ရေးထားတာပါ . virus နှင့်ပတ်သက်ပြီး သိသင့်သိထိုက်တာများကို ရေးထားပေးထားတာပါ . ဗိုင်းရပ်စ်ရေးသားပုံ ပုံစံနှင့် ကာကွယ်ပုံ ကာကွယ်နည်းကိုပါ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ် . virus ကတော့ အမျိုးအစား အများကြီးရှိပါတယ် . တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ရေးသားပုံချင်း မတူညီကြပါဘူး . တိုက်ခိုက်ပုံချင်းလဲ မတူညီကြပါဘူး . ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ ကွန်ပျူတာနှင့် အင်တာနက်သုံးနေသမျှ ကာလပတ်လုံးကတော့ virus ဆိုတာကို မရင်းနှီးချင်လဲ ရင်းနှီးနေရမှာပါ . ရေးသားနည်းတွေကလည်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ တော်တော်လေး ပြင်းထန်လာတာတွေ့ရပါတယ် . အခုကာကွယ်နည်းကို ဖတ်ရင် ဗိုင်းရပ်စ်အားလုံးကို ထိန်းချုပ်နိုင်သွားပြီလားဆိုရင်တော့ မထိန်းချုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ပဲ ပြောပြရမှာပါ . တစ်ချို့ virus တွေက antivirus program တွေကိုတောင် လှည့်စားနိုင်တဲ့ ပိတ်ဆို့ထားနိုင်တဲ့ virus တွေ အများကြီးပါ . ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက ဒီစာအုပ်ကလေးကို ဖတ်ပြီးတော့ သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို သိသွားစေချင်တဲ့ ဆန္ဒတစ်ခု တည်းပါ။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ .
web page လေ့လာရန် အလေ့အကျင့်ကောင်းများ (မြန်မာလို)
ဦးအောင်လင်း ရေးသားထားတဲ့ window7အသုံးပြုနည်း လက်စွဲပါ။ window7ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မသုံးတတ်သေးတဲ့သူများ ဖတ်ထားသင့်ပါတယ် . xp ကနေ window7ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ နည်းနည်းကြောင်တတ်ပါတယ် . ဒါပေမယ့် သိပ်မကွာပါဘူး . တစ်ချို့တစ်လေလောက်ပဲ ပြောင်းသွားတာပါ . လိုချင်ရင် အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ ။
ဒါကတော့ ညီလေးတစ်ယောက် chat box ထဲမှာ ပေးလိုက်လို့ ထပ်တင်ပေး လိုက်ပါတယ် . 2.1 version အသစ်ပါတဲ့ ဖတ်ချင်တဲ့ သူများကတော့ အောက်မှာ Download လုပ်ပြီးတော့ ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြပါ။
နောက်ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတို့ဆီမှာလဲ နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်များရှိရင် konyinaymin@gmail.com သို့ ပေးပို့ပေးနိုင်ပါတယ် . ကျွန်တော့်ဆိုက်မှာ မရှိတဲ့ စာအုပ်တွေ ရှိနေပါသေးတယ် . Download ifile.it | Mediafire | Ziddu | Megaupload
ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ ကဏ္ဍတွေခွဲပြီးတော့ ၀ဘ်ဆိုက်လပ်စာတွေကို စာရင်းပြုစုထားပါတယ် . စာဖတ်သူများ မသိသေးတဲ့ လိပ်စာတွေလဲ အများကြီး ရှိပါတယ် . နည်းပညာ၊ လူမှု့ရေး၊ ပညာရေး အစရှိသည့်ခေါင်းစဉ်များဖြင့် ၀ဘ်ဆိုက်များကို ပေါင်းစည်းပြီးတော့ ထည့်ပေးထား ပါတယ် . တစ်ခုခုလိုအပ်လို့ လိုက်ရှာနေမယ်ဆိုရင် အချိန်မကုန်တော့ဘူးပေါ့ . ထည့်ထားတဲ့လိပ်စာတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် နောက်ထပ်လဲ ကျန်နေပါသေးတယ် . လတ်တလော သိသလောက် Popular ဖြစ်တဲ့ ဆိုက်တွေကိုပဲ ထည့်ရေးပေးထားတာပါ . စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ ။
3Ds Max အကြောင်း အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန် (မြန်မာလို)
ဒါကတော့ 3D အကြောင်း စိတ်ဝင်စားတဲ့သူများအတွက် အထောက် အကူဖြစ်မှာတော့ သေချာပါတယ် . တစ်ခြားသူတွေလဲ 3D design တွေကို စမ်းပြီးတော့ လုပ်ကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Download လုပ်ပြီးတော့သာ စမ်းကြည့်ကြပါ . အားလုံးအဆင်ပြေ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် ..
ဒါကတော့ mp3, mp4 တွေကို အသုံးချနည်းနှင့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြရေး သားထားတာပါ . mp3 mp4 ကိုင်နေတဲ့ သူများအတွက်တော့ ဖတ်ထားသင့်တာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား . ကျွန်တော်ကတော့ သိပ်မသုံးဖြစ်ဘူး . ခုရေးထားတာ မြန်မာလိုနော် . သေချာနားလည်အောင်ဖတ်ပေးပါ ။ ခဏခဏ မေးနေကြလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။
Download ifile.it | Mediafire | Zshare | Zidu | Megaupload
ဒီစာအုပ်ကတော့ joomla ၀ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက် ရေးပေးထားတဲ့ စာအုပ်လေး တစ်အုပ်ပါ . အတော်လေးအဆင်ပြေပါတယ် . နားမလည်တဲ့သူတွေလဲ ဖတ်ပြီးတော့ လက်တည့်စမ်းကြည့်ပေါ့ . အဆင်ပြေမှာပါ . ကဲလိုချင်ရင် အောက်မှာ download ဆွဲလိုက်ပါ Download ifile.it | Mediafire | Zshare | Ziddu | Megaupload
ကဲ မလုပ်တတ်တဲ့သူများ ကြည်ပြီးတော့ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ. အားလုံး အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ် . software ကတော့ တင်ထားပြီးသားထင်တယ် မတင်ရသေးဘူး ဆိုလဲ ပြန်တင်ပေးပါ့မယ် . Download ifile.it | Megashare | Zhare | Ziddu | Megaupload
ကဲ ဒါကတော့ တောင်းထားတာကတော့ ကြာပါပြီ စုပြီးတော့ ၃ အုပ်တင်ပေးလိုက်တယ် . အားလုံးပဲ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . နောက်ပိုင်းကျွန်တော် Plugin လေးတွေကို တင်ပေးပါဦးမယ် . ခုတော့ ဒီစာအုပ်ကလေးတွေထဲကအတိုင်း စမ်းပြီးတော့ ဒီဇိုင်းလေးတွေ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ . အာလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . Download ifile.it | mediafire | Zshare | Ziddu | megaupload
Nero အသုံးပြုနည်း လက်စွဲ (မြန်မာလို)
window vista တင်နည်း (မြန်မာလို)
ဒါကတော့ window vista ကို ဘယ်လို ၀င်းဒိုးတင်ရမယ်ဆိုတာကို မသိတဲ့သူများအတွက် ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကိုရေးထားတာပါ . window မတင်တတ်သူများ ဖတ်ထားသင့်ပါတယ် .
လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ဖို့ တင်ပေးပါတယ် .
Networking အကြောင်း စာအုပ် (မြန်မာလို)
ဒါလေးကတော့ networking အကြောင်း ရေးပေးထားတဲ့ စာအုပ်ကလေးပါ . သူကလဲ ဖတ်ထားသင့်ပါတယ် . ဖတ်ချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ download လုပ်ထားလိုက်ပါ .
Microsoft Visual Basic 6.0 (မြန်မာလို)
ဒီစာအုပ်ကလေးကတော့ ကကကွန်က ရေးထားတာလေးပါ virtual basic6အကြောင်းကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လေးရေးပေးထားပါတယ် . လိုချင်တဲ့သူများကတော့ ထုံးစံအတိုင်း အောက်မှာ download လုပ်ကြပါ . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပိပါတယ် .
အဆင့်မြင့် ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုနည်း (မြန်မာလို)
ဒါကတော့ အင်တာနက် ဘယ်လိုသုံးမလဲနှင့် Blog တွေကို ဖန်တီးဖို့ အကြောင်း အရာ တွေကို ရေးသားထားတာပါ . ဖတ်သင့်ပါတယ် . ဒေါင်းထား ပြီးတော့ အားတဲ့အချိန် ဗဟုသုတအနေနဲ့ဖတ်ကြပါ .
ကွန်ပျူတာ ပြုပြင်ချင်းဆိုင်ရာ သိသင့်ချက်များ (မြန်မာလို)
ကျွန်တော်လဲ ကိုယ်တိုင် pdf စာအုပ်ကလေးတွေ ကိုယ်တိုင် မလုပ်နိုင်သေးတော့ သူများ လုပ်ထားပြီးသား ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေ ချည်းကိုပဲ တင်ပေးနေရတာ အားတော့နာပါတယ် . အချိန်ရရင်တော့ လုပ်ပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ် . စိတ်မပူပါနဲ့ ထိုင်းကိုရောက်နေပြီ ဆိုတော့ အစီအစဉ်သစ်တွေ ဆွဲထားပါတယ် . နေ့တိုင်း Update ဖြစ်အောင် ဆိုက်ကို ကြိုးစားပြီးရေးသွားမှာပါ. အခုစာအုပ်ကလေးကတော့ ကွန်ပျူတာပျက်ရင် စဉ်းစားတွေးခေါ်ရမယ့် အချက်ကလေးတွေကို ရေးပေးထားတာပါ . မသိသေးတဲ့သူများ အတွက်တော့ အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ် . လိုချင်ရင် အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ .
cracking ဆိုတာ ဘာလဲ (မြန်မာလို)
ဒီစာအုပ်ကို programming ပိုင်း နားလည်တဲ့ သူအတွက် မခဲယဉ်းပေမယ့် နားမလည်တဲ့သူ အတွက်တော့ နည်းနည်းလေး ရှုပ်နေမယ်ထင်တယ် . ဒါပေမယ့် ဖတ်ထားသင့်တဲ့စာအုပ်လေးပါ . ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ သဘောတရားကို နားလည် သွားတာပေါ့ . ဟုတ်ပြီလား . လိုချင်ရင် အောက်မှာ download လုပ်လိုက်ပါ.
Download ifile.it | Mediafie | Zshare | Ziddu | Megaupload
Adobe indesign cs3 (မြန်မာလို)
တောင်းဆိုထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . Adobe indesign cs3 မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ . pagemaker ကတော့ နောက်ကောက်ကျန်ခဲ့ပြီလေ . indesign ကတော့ pagemaker အစား နောက်ထက်ထွက်တဲ့ new version program ပါ . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါDownload ifile.it | mediafire | Zshare | Ziddu | Megaupload
Ultra Flash Video FLV Converter isaprogram designed by Aone Software in order to allow you to convert your videos (DivX, XviD, AVI, WMV, MPG, MPEG, MP4, M4V, FLV, 3GP, ASF, RM, RMVB, MOV, MOD, ASX, MKV, OGM, SVCD, VCD, VOB into FLV (Video Flash Encoder) and SWF. အမျိုးအစား တော်တော်များများကို convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် . Download ifile.it | Mediafire | Zshare | Ziddu | Megaupload
adobe premiere video တည်းဖြတ်ခြင်းစာအုပ် (မြန်မာလု...
security center can't be started error ဘယ်လိုဖြေရှ...
Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x64...
Acer Aspire 4736 4736Z 4736G 4736ZG Windows XP x86...
web page လေ့လာရန် အလေ့အကျင့်ကောင်းများ (မြန်မာလို)...
အင်တာနက်သုံး ၀ဘ်ဆိုက်လိပ်စာများစုစည်းထားသည့် စာအုပ...
ကွန်ပျူတာ ပြုပြင်ချင်းဆိုင်ရာ သိသင့်ချက်များ (မြန်...
Toshiba Satellite C660 Drivers for window7(32)
Compaq 325 drivers For Windows7
Harry Potter short cut ကို ဘယ်လို ဖျက်မလဲ
Driver Satellite C640 and C640D For Windows XP
Lenovo IdeaPad Z460 Drivers Windows7(32 Bit)
lenovo idea pad z460 xp driver